नेपाल प्रहरीकाबाट आयो यस्तो खबर, पद थप्ने प्रस्ताव गर्दै गृहमन्त्रालय को धाउदै छ ? « Light Nepal
नेपाल प्रहरीकाबाट आयो यस्तो खबर, पद थप्ने प्रस्ताव गर्दै गृहमन्त्रालय को धाउदै छ ?
Published On : 12 January, 2018 10:50 am
काठमाण्डौ – प्रदेश प्रमुख र प्रदेश केन्द्रको बहस भइरहेका बेला सुरक्षा निकायहरू भने पद थप्ने दौडधुपमा छन्। नेपाल प्रहरीले नायब महानिरीक्षकका ९ पद थप्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दुई डीआईजी र एक एआईजी थप्न दबाब दिएको छ। यो खबर सुरेशराज न्यौपानेले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।